AlmaLinux, iyo CloudLinux imwe nzira kuCentOS 8 | Linux Vakapindwa muropa
CloudLinux vagadziri vakaburitswa munguva pfupi yapfuura vakabvuma zita rekuti "AlmaLinux" yekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwebazi reC CentOS 8.
Iyo purojekiti pakutanga yainzi Lenix, asi ikozvino zvakagadziriswa kuti AlmaLinux raizove rakakodzera zita kutsiva CentOS kupfuura Lenix Linux. Iyo yekutanga vhezheni yekugovera kit yakavimbiswa kuti ichaumbwa mukati mekota yekutanga ya2021.
Kufanana neyekutanga CentOS 8, kugovera kunozobva paRed Hat Enterprise Linux 8 base package uye ichave inoenderana zvizere neRHEL mabhinari.
Vashandisi vachakwanisa kushandisa AlmaLinux sechinhu chakajeka chinotsiva CentOS 8, mukuwedzera kutaura kuti kutama kuchave kuri nyore kwazvo.
Kugadziridzwa kwebazi reAlmaLinux rekuparadzira zvichibva paRHEL 8 package package kuchaburitswa kusvika 2029.
Mutsigiri mukuru wekusimudzira ndeye CloudLinux, izvo zvinopa zviwanikwa uye vanogadzira kuchirongwa. Kazhinji, iri kuronga kushandisa miriyoni yemadhora pagore mukuvandudzwa kweprojekti, kunyangwe hazvo iko kuti iko kugovera kunenge kuri kwemahara zvachose kune ese mapoka evashandisi uye kuchave kwenharaunda uko mabasa ekuita sarudzo achapihwa.
Iyo yekudyidzana uye hutongi modhi kubva munharaunda yeAlmaLinux ichavakwa yakafanana neiyo Fedora chirongwa uye zviitiko zvese zvichaburitswa pasi pemarezinesi emahara.
Nyaya hombe yevashandisi veCentOS, muchirevo cheshanduko kubva kuClassOS yechinyakare kuenda kuCentOS Stream, yaive kubviswa kwechimbichimbi kwerutsigiro rweCentOS 8.
Kana vachitamisa mashandiro avo kuCentOS 8, vashandisi vaitarisira kuti rutsigiro rweprojekiti rucharamba uripo kusvika 2029, asi Red Hat akafunga kurega kuburitsa magadziriso pakupera kwa2021, achisiya chete mukana wekutamira kuCentOS Stream, ine kugadzikana uye kuenderana neRHEL hazvina chokwadi.
Kunze kwaAlmaLinux, Rocky Linux uye Oracle Linux zvakaiswawo senge dzimwe nzira kune yekare CentOS. Rocky Linux inovandudzwa zvizere nenharaunda, haina zvinoenderana nezvinodiwa nemakambani ega, asi inogona kushaya zviwanikwa uye vanofarira.
Oracle Linux yakasungirirwa kuOracle, iyo inogona kufungisisa mutambo chero nguva. AlmaLinux iri kuyedza kutsvaga muyero wakaringana pakati pekutsigirwa kwekambani uye zvido zvemunharaunda; Kune rimwe divi, CloudLinux zviwanikwa uye vanogadzira, vane ruzivo rwakakura mukutsigira maforogo eRHEL, vachatora chikamu mukuvandudza, uye kune rimwe divi, chirongwa ichi chichava pachena uye chiri pasi pesimba revagari.
"Kutsakatika kweshanduro yakagadzika yeCentOS kwakasiya mukaha mukuru munharaunda yeLinux iyo yakatungamira CloudLinux kupindira nekutanga imwe nzira yeCentOS," akadaro Igor Seletskiy, CEO uye muvambi weCloudLinux Inc. "YeCloudLinux kwaive kufamba kuri pachena . - Nharaunda yeLinux yaida iyo, uye iyo CloudLinux OS idombo reCentOS rine rakakosha pedigree, kusanganisira anopfuura mazana maviri ezviuru anoshanda seva ...
Panguva ino, Facebook ne Twitter vakasarudza CentOS Stream uye vakurudzira kuumbwa kweboka rinoshanda reHyperescale. Iri boka rinotarisisa kusimudzira kwemhinduro zvichibva kuCentOS Stream uye EPEL yezvivakwa zvakakura senge Facebook neTwitter.
Nhengo dzechikwata dzinovandudza maseti akasarudzika emapakeji uye maturusi ekuendesa CentOS Stream pane izvi zvigadzirwa.
Mabasa eboka anosanganisira kudzosera kumashure mavhezheni matsva emamwe mapurojekiti makuru, senge Facebook-yakatsigirwa systemd chiteshi cheCentOS, zvichibva pamapakeji eFedora.
Aya mashure ekumashure anogona kushandiswa sekutsiva kuri pachena kwemapakeji akapihwa mukupararira kukuru kweCentOS Stream.
Chimwe chinangwa cheboka kurongedza hukuru-hukuru bvunzo dzekushandurwa kwekushanda mukuparadzira kurerutsa kusangana mukugoverwa kwezvinhu zvitsva, senge kopi-yeku-nyora rutsigiro muDNF neRPM, ichikanganisa pasuru yese yemapakeji.
Iyi ficha irikuedzwa ikozvino paFedora, asi boka rinoshanda rinotarisira kuti riite kuti riongorore kushanda uku munzvimbo dzeCentOS Stream-based.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » AlmaLinux, iyo CloudLinux imwe nzira kuCentOS 8
Usavimba nemakore. How Tech Inoparadza Ramangwana